Taorian’ny taona maro nanaovana hetsi-panoherana, havadika ho Ivontoerana fiarovana biby ny valan-javaboarin’i Islamabad · Global Voices teny Malagasy
Tsara fiafaràna ny 2020, nafàna ny adihevitra momba ny fampijaliana biby ao Pakistàna
Voadika ny 20 Marsa 2021 3:16 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Español, Ελληνικά, Français, українська, Nederlands, 日本語, English
Liona tao amin'ilay Valam-biby.Sary ao amin'ny Wikipedia, an'i Carlosar. CC BY-SA 3.0……..
Navoaka ofisialy izao fa nakatona tanteraka ilay Valam-biby ao Islamabad, izay loharanom-pitarainan'ireo Pakistaney mafana fo mpitia biby ary novàna ho ivontoerana fiarovana biby, araka ny fanambaràna nataon'ireo tomponandraikitry ny tanàna tamin'ny 8 Desambra.
Ny volana May, namoaka didy ny fitsarana avo ao Islamabad fa tsy maintsy afindra ao amin'io ivontoerana fiarovana biby io avokoa ireo biby miisa 878 ao. Namoahan'ny fitsaràna didy ihany koa ny hamindràna ny fitantanana avy amin'ny Islamabad Metropolitan Corporation (IMC) ho an'ny Islamabad Wildlife Management Board (IWMB), tao anatin'izany no nanapahan‘ny Ministry ny fiovaovan'ny toetrandro hanova io tany manana velarana 82 hektara io ho ivontoerana fiarovana ny fiainan'ny bibidia.
Nandefa bitsika i Rina Saeed Khan, mafana fo amin'ny resaka toetrandro sady mpikambana tsy ofisialy ao amin'ny IWMB:
Araka ny tolokevitry ny @WildlifeBoard, natomboky ny @ClimateChangePK ny dingana hanovàna ny #IslamabadZoo ho lasa #WildlifeConservationCentre (ivontoeranaFiarovanaBibidia) manana toerana iraisampirenana pic.twitter.com/3DrgFzhHXI
Ny volana Jolay, liona roa no maty noho ny fahasemporana tao amin'ny valam-bibin'i Islamabad taorian'ny afo narehitr'ireo mpikarakara tao anatin'ny tranon'ireo biby hanerena azy ireo hivoaka tao. Niparitaka tamin'ny filazambaovao sosialy ny horonantsary momba izany, ka niteraka hatezerana be.
Ny volana Aogositra, olom-pirenena maro tongasaina tao Peshawar no nameno fanangonan-tsonia tany amin'ny Fitsarana Avo tao an-tanàna nitaraina noho ny fampijaliana mahazo ireo biby misy ao amin'ny Valam-bibin'i Peshawar. Voalazan'izany fanangonan-tsonia izany fa biby 18 no maty tao amin'io vala io nandritra ny sivy volana lasa.
Ny volana Oktôbra, nitory ny Valam-bibin'i Karachi ireo fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena sivily taorian'ilay horonantsary nalaza be iray nampiseho bera siriàna iray miloko volontany izay nahitàna mariky ny havizanana sy ny hetaheta mafy.
Indray Alahadin'ny ririnina taona 2018, tamin'ny 9 ora maraina, no sendra nahita elefanta mifatotra rojo vy aho tao anatin'ny valam-biby Karachi. Nalaina fony kely avy any an'ala any Tanzania, samy voafatotra rojo vy avy ny tongotra telon-dry zareo, nitoka-monina. #FreeTheKarachiElephantshttps://t.co/XOk1mH3hJZ pic.twitter.com/JgS6oOJ2SM
Tamin'ity herinandro, niteraka hatezerana ihany koa ny lahatsary iray ahitàna liona entina an-tery amina fihetsiketsehana nataon'ny antoko mpanohitra Pakistan Democratic Movement . Nalain’ny manampahefana io liona io taoriana kelin'izay. Efa mahazatra ihany koa ny mahita antoko politika sasany ao Pakistan mitondra biby ho any amin'ny famoriam-bahoaka ho toy ny Sary Famantarana.
Tena mahamenatra sy maharikoriko loatra izy ity! Bibidia entina amin'ny hetsika politika & hita fa ketraka sy tsy mahazo aina. Mila mandrara ny fanaovana ny sakadia ho biby fiompy & famarotana azy ireo i Pakistana #MaryamNawazLahoreRally @ZacGoldsmith @WWFPak @CITES @ARYNEWSOFFICIAL @PunjabWildlife @hnaqikhan pic.twitter.com/nIdYNjdwzx
Araky ny voalazan'ny Dawn News, “Manamora ny fanafarana biby tsy fahita firy ny lalàna ao Pakistana, saingy vantany vao tonga ao amin'ny firenena, toy ny tsy misy mihitsy ny lalàna.” Heverina fa feno valam-biby tantanin'olontsotra ao amin'ny firenena, izay tena voarara eratany ny fivarotana azy ireo.
Malaza ihany koa i Pakistana amin'ny fihazàna ny vorona an-tanety lehibe antsoina hoe akoholahin'ala houbara, izay manana satam-piarovana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Mahazo dolara an-tapitrisany isan-taona ihany koa ny governemanta amin'ny alàlan'ny fivarotana fahazoandàlana hanao fihazàna satroboninahitra (trophy hunting) atao an'ilay biby markhor tsy fahita afatsy ao Pakistana.
Lalàna iray tamin'ny vanim-potoanan'ny fanjanahantany britanika no mamaritra fa onitra 50 ka hatramin'ny 500 ropia pakistane (0.30-3 dolara amerikàna eo ho eo) no sazy ho an'ireo olona mampijaly biby. Ny karama farany ambany farafahakeliny any Pakistana anefa dia 17 500 ropia ( 109 dolara amerikàna) eo.
Nanome toky ny governemanta ankehitriny fa hanova ny lalàna mikasika ny fampijaliana biby.